#Khilaafka Gaas iyo Camey: Fashil Siyaasadeed mise Faragalinta dowlada Federaalka ? | Get Latest News From Horn of Africa
#Khilaafka Gaas iyo Camey: Fashil Siyaasadeed mise Faragalinta dowlada Federaalka ?
Siyaasiyiinta Soomaalida waxaa dhaqan soo jireen ah u noqday in Fashilkooda Siyaasadda ay ku eedeeyaan dushana u saaraan Cid kale, ugana baxsadaan Mas’uuliyaddii ay Dadka iyo Dalka u qaadeen. Waxaana Tusaale kooban u qaada karnaa;
Jabhaddii USC markii ay ku fashilantay Xasilinta iyo Hoggaaminta Dalka waxa ay eeddii fashilka dusha u saartay Saaxibadood SULUX iyo MAANAFEYSTO!
Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad waxa uu eeddii fashilkiisa dusha u saaray Qab-qableyaashii ilma adeertiis ee Xamar iyo R/Wasaarihiisii Xasan Abshir oo ka goostay markii uu tabar dhigay!
Qab-qableyaashii Xamar ayaa eeddii fashilkooda dusha ka saaray dawladdii ay Waziirada iyo Xildhibaanada ka ahaayeen ee Madaxweyne Cabdullahi Yusuf AUN markii ay doorteen kadibna ay la heshii-waayeen!
Madaxweyne Cabdullahi Yusuf ayaa fashilkiisii ku eedeeyey R/wasaare-yaashiisii Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Cadde oo isagu doortay kadibna is khilaafeen!
Maxkamadihii ayaa fashilkoodii ku eedeeyey Dawladdii Federaalka oo ay la heshii-waayeen, kadibna ku dalbatay dowlada Ethiopia!
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa fashilkiisii ku eedeeyey saaxibadiis Xizbul-Islaam iyo Al-Shabaab oo la dagaalay iyo R/Wasaarihiisii Gaas oo la tartamay!
Madaxweyne Xasan Sheakh ayaa Fashilkiisii Siyaasadda ku eedeeyey R/Wasaarihiisii ugu danbeeyey oo la tartamay iyo kuwii ka horeeyay ee uu la heshii-waayey!
Madaxweyne Xaaf oo ku xigeenkiisii Carabey ku eedaynaya Xamar ayaa laga soo diray, markii uu ku fashilmay in uu la heshiiyo taladana la qeybsado?
Shariif Xasan oo khilaafay Dastuurkiisii ku xigeenna aan sameysan 4 sano ayaa ku eedeeyay Xamar in ay ka qaadatay Xildhibaanadii uu Gacantiisa ku qortay, Guddigii uu Gacantiisa ku Magacaabay iyo Guddoonkii Barlamaankiisa ee uu Qalinkiisa ku xushay?
Gaas ayaa ku xigeenkiisa Camey ku eedeeyay in Xamar laga soo diray lana rabo in Puntland lagu bur-buriyo! Camey ayaa ku Jawaabay in Gaas iyo Farmaajo ay iska xigaan saaxiibana horey u ahaayeen, Xamarna ay Siyaasadda iskala soo bilaabeen! Iyaga oo ay u hartay hal bil kaliya ayey muuqataa in ay kala quusteen!
Axmed Madoobe ayaa laga yaabaa in uu maalmaha soo socda ku eedeeyo ku xigeenkiisa Maxamud Sayid fashilkiisa Gedo!
#Solskjaer:Man Utd diyaar uma ahan inay la tartanto City ama Liverpool xilli ciyaareedka soo aadan
#Ole Gunnar Solskjær ayaa ku adkeysanaya in uu yahay…
2 hours ago 3,696
2 hours ago 13,703
#Sarkaal Shabaab ah iskana dhiibay…
2 hours ago 78,557
Apr 23, 2019 423,343